Hijet 2004 အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Sa Khwar Khwar
ကြည့်သူအရေအတွက်: 386 (+2)
Hijet 2004 . YGN လူအမည်ပေါက်
လိုင်စင် 2020 မေလကုန်ထိ
AC. Ps ( No ) . 2Wd Manual
ဆိုဖါထိုင်ခုံ ဆိုဖါကျောမှီလေးနဲ့ မိသားစုခရီးထွက်မယ်ဆို
ရောင်းမယ့်ဈေးက 77 သိန်း
အမည်: Hijet 2004